Gudoomiyaha guddi hoosaadka caddaalada ee Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa soo saaray codsi uu uga dalbanayo ilaa iyo 60 qofood dukumintiyo qeyb ka ah baaritaanka faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyay doorashadi uu kusoo baxay madaxweyne Trump sannadki 2016-kii.
Dadka codsiyada loo diray waxaa ku jira qaar ka mid ah saraakiisha sare ee Aqalka Cad iyo Waaxda Cadaalada, waxaana tani ay qeyb ka tahay dardar-gelinta baaritaanka uu hormuudka u yahay baare sare Robert Mueller.
Xildhibaan Jerrold Nadler ayaa u sheegay telafishanka ABC News in codsiga lagu dalbanayo dukumintiyada la diray, si loo billaabo baaritaan uu u sheegay inuu muhiim u yahay shacabka Mareykanka kuna saabsan danbiyo la xiriira marin habaabin caddaaladeed, musuq maasuq iyo ku tagrifalid lagu sameeyay awoodda dalka.
Waxa uu sheegay in guddiga uu doonayo inuu arko dokumentiyada wiilka Trump ee Donald Trump Jr iyo Allen Weisselberg oo ah madaxa maaliyadda ee shirkadda Trump Organization oo ah shirkadda ganacsiga ee madaxweynaha.
Nedler ayaa sidoo kale sheegay inay rumeysan yihiin in madaxweynaha uu is-hortaag ku sameeyey cadaaladda labadii sano ee uu xilka hayey.